Ny fahatongavan’ny valalamanjohy no ahitan’i Meksika ny lafiny maha-tsy tia mpifindramonina azy ihany koa · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Mercedes Matz, Laura Vidal Nandika (en) i Laura Vidal, Naomy
Voadika ny 21 Novambra 2018 8:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, 简体中文, Ελληνικά, 繁體中文, Español
Toy izao ny fivakin'ny sary avy aty ankavia miankavanana: “Hampitombo ny tahan'ny heloka bevava eto amin'ny firenena iretompifindramonina ireto”, sy hoe “Tsy heloka ny fiezahana hanavotra ny fiainanao ho any amin'ny firenen-kafa”. Nataon'ny vondrona FTMF (ONG), nozarain'ny Foibem-Panazarana sy Fanolorantena sosialy. Nahazoana alalana.
Raha mizotra eny an-dalana ho any Meksika ny valalamanjohin'ny mpifindramonina avy any Amerika Afovoany, dia maro amin'ireo olona ao an-toerana no nankao amin'ny media sosialy haneho ny fitompoan-teny fantatra manoloana ireo mpifindramonina — izay matetika misy itovizany amin'ny fihetsika tsy tia mpifindramonina mihatra amin'ny Meksikana hita any Etazonia.
Olona an'arivony no mandositra ny fahantrana sy ny herisetran-dahalo ao Amerika Afovoany ary mitodi-doha mianavaratra, ary ny maro amin'ireo dia mandeha an-tongotra ary matetika no mitondra zazakely miaraka aminy. Samy manana ny lalan-kalehany ireo fa ny maro no heverina ho any Etazonia — nefa efa bemidina miaramila goavana no efa miatrana miandry azy ireo — raha misy ireo hafa izay efa miomana ny hitady fialokalofana ao Meksika.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, valalamanjohy dimy no niainga avy any Amerika Afovoany. Ny sasany nokarakaraina tao amin'ny Facebook. Rehefa nanomboka tonga tao Meksika ny vondrona voalohany, dia namaly maventy tamin'ny alalan'ny tenirohy #CaravanaMigrante sy #CaravanaMigranteCDMX ny tao amin'ny tambajotran-tserasera.
Misy ny fisarahan-kevitra, maro ireo manohana ny valalamanjohy, fa mipongatra ihany koa ny ankilany amin'i Meksika maneho miharihary ny fanoherany ny mpifindramonina. indro ny ohatra roa amin'izany:
Avelao ry zareo hiantso antsika ho fasista na ho zanak'i Donald Trump. Amin'ny maha-meksikana antsika dia mananjo hiaro ny fiandrianam-pirenentsika sy ny filaminan'ny fianakaviantsika isika. Tsy ilaina ny #MigrantCaravan. Tokony hiverina any an-tanindrazany ry zareo ary hiasa any amin'ny ilàna azy ireo.
Ho sarotra tanteraka ho azy ireo ny hiditra ao Etazonia, misalasala tanteraka aho hoe hiverina any amin'ny fireneny ireo olona ireo. Hijanona eto Meksika ireo, saingy manantena inona? Aoka ny governemanta hikarakara azy ireo?
Nangonin'ny seha-baovao an-tserasera Plumas Atómicas ireo eritreritra tahaka ireo efa voasoratra etsy ambony ary nampilahariny tamin'ny tantaram-pifindramonin'i Meksika ihany:
Efa ela i Meksika no nanana fombandrazana ireharehany amin'ny fanokafany varavarana amin'ireo enjehina, lasa an-tsesintany, na lasibatry ny herisetra: hatramin'ny fotoan'andron'ny jiosy espaniola nandritra ny vanim-potoanan'i Espaina vaovao; Ny Irlandey izay nanatevin-daharana an'i Meksika tamin'ny fananiham-bohitra Amerikana; ny Libaney nandositra ny hanoanana any amin'ny fireneny tamin'ny taompolo 1920s, ny repoblikana izany sesitany nandritra ny ady an-trano espaniola sy taorian'ny fandresen'i Franco. Breziliana, Arzantiniana, Paragoayana, Kolombiana, Peroviana ary Orogoayana izay nenjehin'ny didy jadona miaramila tany amin'ny fireneny […] Fa nahoana no misy ny mpialokaloka kilasy voalohany sy kilasy faharoa?
Nasongadin’ny mpaneho hevitra hafa (Patricio Solís sy Miguel Carbonell) ny esoeson'ny fanavakavahana meksikana antserasera nefa dia ny Meksikana no tena iharan'ny fanilikilihana amin'ny politikam-pifindramonina ataon'i Donald Trump :
Ity sary-sy-soratra ity dia momba ny toeran'ny valalamanjohy eo anoloan'ny fitaratra mpanavakavaka avy amin'ny nasionalisma mestizo meksikana, sy ny hetahetany hatry ny ela dia ela hitovy amin'ny fotsy hoditra, ary sambany teo amin'ny tantara no mahatsapa ho voarahon'ny fifindramonina avy any atsimo. Manahy aho fa mbola hahita betsaka isika rahatrizay.
Ny sary ao anatin'ny sioka dia mampiseho hafatra tsy tia mpifindramonina eo amin'ny ilany ankavia (“Tandremo mba tsy handalo an'i Meksika ny valalamanjohy noho ny antony ara-piarovana, sy fahantrana, sy fahabetsahan'ny mponina tafahoatra, sns”), ary amin'ny ilany ankavanana kosa ny valiny miaro ireo mpifindramonina (“Mila manampy azy ireo isika, omeo asa ireo, olombelona ireo… Ahoana ny fiantraikan'izany aminao? Andriamanitra hitahy azy ireo”). Feno fahadisoan-tsipelina ihany ny valiny na izany aza izay toa milaza ankolaka fa ireo mpiaro ny valalamanjohy dia tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ary avy ao amin'ny saranga ambany.
Amin'ny fitsipahana fikarakarana mendrika ny mahaolona an'ireo mpifindramonina manao valalamanjohy ireo isika mampitovy ny tenantsika amin'ireo governemanta mpankahala vahiny sy mpanavakavaka izay notsikeraintsika nandritra ny taona maro. Tsy azontsika atao ny mianjera ao amin'ny fandriky ny firesaka tsy tia mpifindramonina izay niainga avy any amin'ny governemantan'i Etazonia.
“Atsipitsipin'ny firenena niaviany ihany”
Ny fahantrana sy ny herisetra ao amin'ny telolafy avaratra [fr] (mahazo an'i Belize, Guatemala, El Salvador ary Honduras), amin'ny ampahany no niteraka izao fifindramonina tsy mbola nisy toy izany izao, fa miezaka ny mandositra izany ny mponina.
Tao amin'ny matoandahatsoratra iray tamin'ny datin'ny 3 novambra, Nasongadin'ny famoahana Salvadoriana El Faro ny niandohan'ny toe-javatra — ary nandresy lahatra fa mifampizara andraikitra amin'izao famoahana ny olony ao amin'ny fireneny izao ny governemanta amerikana afovoany sy i Etazonia:
Inona moa no andosiran'ireto fianakaviana manontolo ireto, misedra habibiana eny an-dalana, manavatsava ny tany anjakan'ny lehiben-drongony, misedra herisetra ara-nofo, fakana an-keriny, eny fa na dia ny fandrahonan'ny filohan'i Etazonia aza, izay milaza fa handefa tafika any amin'ny sisintany izy? Mitsoaka ny famoretan'ny mpanao tsirefesimandidy any Nicaragua ireo, mitsoaka ny rediredin'ireo adala mpanolikoly ao Guatemala. Mandositra ny governemantan'i El Salvador tsy mahavita azy, mandositra ireo mahery fihetsika na ankavanana na ankavia, mba hamaranana ny famonoana olona, ny hantsana eo amin'ny saranga sy ny kolikoly. Mandositra ny herisetran'ireo andian-jiolahy voaroaka avy any Etazonia, izay mitaky fahatokisana ho takalon'ny sombin-kanina, eny fa na di a tompon'andraikitra ihany koa amin'ny toe-draharaha ao amin'ny faritra aza ry zareo. Mandositra ireo sangany malaindaina sy fiandrasana hoavy ampolo taonany maro tsy mety tonga mihitsy.
Ary dia nanaovana fehinteny:
ireo valalamanjohy ireo no lakilen'ny olana rehetra ao amin'ny faritra, tafiditra amin'izany i Meksika sy i Etazonia.[Ny fametrahana azy ireo ho jiolahy] dia midika manakiana ny mpifindramonina noho ny tsy fahitan'ireo governemanta ao amin'ny faritra vahaolana, hatrany Managua ka hatrany Washington.